नेपाल आज | किन लेखे माधव नेपालले नोट अफ डिसेन्ट ?
किन लेखे माधव नेपालले नोट अफ डिसेन्ट ?
काठमाडाैँ – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधवकुमार नेपालको नोट अफ डिसेन्ट बारे पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका छन्। उनले नोट अफ डिसेन्टलाई छलफलको प्रक्रिया भएको जिकि‍र गरेका छन्। पार्टी कामका दाैरान बाँके पुगेका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीभित्र छलफल हुने र नोट अफ डिसेन्ट राख्ने कुरा विधिकै कुरा भएको स्पष्ट पारे ।
सात प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्दा विधि, पद्धति मिचिएको भन्दै नेता नेपालले सोमबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा लिखित असहमति राखेका थिए । नेता नेपालले पार्टीमा विधिभन्दा पनि व्यक्ति हावी भएको भन्दै तीनपटक नोट अफ डिसेन्ट राखिसकेका छन् ।
प्रचण्डले बाँकेमा सञ्चारकर्मीसँग भने, “पार्टीभित्र छलफल सधैँ नै हुने गरेको छ । उहाँ (माधव नेपाल)ले एक दुईजनाको नाम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसमा जोड दिनुभएको थियो । अब बैठकले त्यो निर्णय गरेन, यो निर्णय गर्यो । उहाँलाई चित्त बुझेन । उहाँले नोट अफ डिसेन्ट राख्नुभयो । यो सामान्य कुरा हो । उहाँले मान्दिन भन्नुभएको छैन ।”
प्रदेश प्रमुख सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने हुनाले पुराना सरकारका नियुक्ति निरन्तरता नदिएको उनले बताए । “सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेश प्रमुख फेरिने प्रचलन छ । कैयौं देशमा त सरकार फेरिएपछि गभर्नर, प्रदेश प्रमुख नैतिकता देखाएर आफैं हट्ने प्रचलन छ । दुई वर्षसम्म उहाँहरूले काम गर्नुभयो । अहिले फेरियो । यसलाई ठूलो कुरा मान्नु पर्दैन ।”
निर्दोष हत्या बन्द गर्न माग गर्दै पाकिस्तानी दूतावास अगाडी जुलुस
नेकपाको झगडामा झण्डै पिसिए देउवा